computer အတွက်နည်းပညာ | အေးမင်းအောင်(နည်းပညာ)
← Registry Tips	Advanced System Optimizer v3.5.1000.14961 + Crack →
computer အတွက်နည်းပညာ	Registry Tips
Desktop မှာ Right Click နှိပ်လို့မရအောင် ..
Start –> Run ကိုခေါ်ပြီး Regedit လို့ရိုက်ထည့်ပါ။ Registry Editor ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ
Dword Value တစ်ခုထပ်ဖြည့်ပါရမယ်။ Value Name က NoViewContextMenu လို့ဖြည့်ပါမယ်။ Data Value က (0=disable, 1=enable)ပါ။
Desktop Context Menu ကိုပိတ်ထားချင်ရင် Data Value 1 ပေးရပါမယ်။ ပြန်ဖွင့်ချင်ရင်0ပေးရပါမယ်။
Task Bar မှာ Right Click နှိပ်လို့မရအောင်
Dword Value တစ်ခုထပ်ဖြည့်ပါရမယ်။ Value Name က NoTrayContextMenu လို့ဖြည့်ပါမယ်။ Data Value က (0=disable, 1=enable)ပါ။
Tray Context Menu ကိုပိတ်ထားချင်ရင် Data Value 1 ပေးရပါမယ်။ ပြန်ဖွင့်ချင်ရင်0ပေးရပါမယ်။
Start Meun က All Programs ကို ဖျောက်ထားချင်ရင်
Dword Value တစ်ခုထပ်ဖြည့်ပါရမယ်။ Value Name က NoStartMenuMorePrograms လို့ဖြည့်ပါမယ်။ Data Value က (0=disable, 1=enable)ပါ။
All Programs Button ကိုပိတ်ထားချင်ရင် Data Value 1 ပေးရပါမယ်။ ပြန်ဖွင့်ချင်ရင်0ပေးရပါမယ်။
Control Panel ကို ပိတ်ထားဖျောက်ထားချင်ရင်
Dword Value တစ်ခုထပ်ဖြည့်ပါရမယ်။ Value Name က NoControlPanel လို့ဖြည့်ပါမယ်။ Data Value က (0=disable, 1=enable)ပါ။
Control Panel ကိုပိတ်ထားချင်ရင် Data Value 1 ပေးရပါမယ်။ ပြန်ဖွင့်ချင်ရင်0ပေးရပါမယ်။
Microsoft word file ကို ဖောင့်မရှိလဲ ဖတ်နိုင်ဖို့
ဒီပြသနာကို အနည်းနဲ့အများတော့ ကြုံဘူးကြမယ်ထင်တယ်
ကိုယ့်စက်မှာ ရိုက်ထားတဲ့ စာကို ကွန်ပျုတာဆိုင်မှာ print သွားထုတ်တော့ ဆိုင်က ဖောင့်မရှိလို့
ကိုယ်ရိုက်ထားတဲ့စာကို သူငယ်ချင်းဆီ ပို့လိုက်တာ
သူ့ဆီမှာ ဖောင့်မရှိလို့ ဖွင့်မရဘူးဆိုတဲ့ ပြသနာ
စသည်.. စသည် ပေါ့ဗျာ
file ကို save as လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ tool ကိုသွား
save option ကိုဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါ
အဲဒီရောက်တော့Embed True Type Fontsနဲ့
Embed characters in use only ဆိုတာလေးကို အမှန်ခြစ်လေးပေးရုံပါပဲ
ကဲ စက်မှာ ဖောင့်မရှိလဲ ဖတ်နိုင်ပါပြီ
မသိသေးတဲ့ လူတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်တာပါ ဖတ်ပြီးသားသိပြီးသားလေးတွေဆိုရင်လဲ ခွင့်လွှတ်ပေါ့ဗျာ
April 28th, 2012 Registry No Comments »
Desktop Background သူများမပြောင်းစေချင်ရင်
ကျနော့်သူ့ငယ်ချင်းက ဟိုတစ်နေ့က ပြောတယ်
သူကွန်ပျုတာကို ဟိုလူသုံး ဒီလူသုံးဆိုတော့ သူထားတဲ့ Desktop Background ကို ပြောင်းပြောင်းနေကြတယ်တဲ့
အဲဒါ ကျနော့်ကို မေးတယ်
အဲဒါ lock ချလို့ မရဘူးလားတဲ့
ကဲ သူငယ်ချင်းလဲ Desktop ကိုသူပြောသလို Lock ချချင်တယ် နည်းလမ်းလေးလဲ မသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ မှတ်ထားလိုက်ပေါ့……..
Registry editor ကိုသွားပါမယ်
Window key နဲ့ R ကိုတွဲနှိပ်ပြီး Run box ခေါ်
ပြီးရင် regedit လို့ရိုက်ထည့် enter ခေါက်လိုက်ပါ
registry editor ပွင့်လာရင်တော့
‘HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Microsoft\_ Windows\_Current Version\_Policies
အဲဒီကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ policies ပေါ်ကို right click ထောက်
New key မှာ Active Desktop လို့ရေးပေးပါ
အဲဒီအမည်ပေါ်ကို ပဲ ညာကလစ်ထပ်နှိပ်ပြီး
New Dword Value ကိုဖွင့်ပြီး NoChangingWallpaper လို့ နာမည်ပေးပါ
ပြီးရင် အဲဒီစာသားပေါ်ကို Double click နှိပ်ပြီး value data ကို 1 လို့ပေးလိုက်ပါ
ပြီးရင် Ok ပေးပြီး registry editor ကထွက်လိုက်ပါ
ပြီးရင် စက်ကို restart ပေးလိုက်ပါ
desktop ကြီး lock ချပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာ
အဆင်ပြေပါစေ အဆင်မပြေရင် mail ကိုအပ်ပြီးတော့မေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ
Microsoft word မှာ မျက်လှည့်ပြမယ်
ကျွန်တော်အခု Share မယ့်ဟာလေးက
Easter egg လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးပေါ့
software တိုင်းမှာ ပါတယ် (ကျနော်တို့တွေ သတိမထားမိတာပါ)
အခု Microsoft word မှာ အလွယ်လုပ်ို့ရတဲ့ဟာလေး ပြောမယ်
word file ကို ဖွင့်ပြီး =rand() လို့ ရိုက်ထလည့်
ပြီးတော့ enter ခေါက်ကြည့်ပေါ့
အဆင်ပြေရင်တော့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကို မျက်လှည့်ပြလို့ရတာပေါ့ဗျာ
နည်းပညာအတွက် အသုံးမ၀င်ပေမယ့် အပျင်းပြေပေါ့
April 28th, 2012 Virus No Comments »
Memory Stick ထဲက ဗိုင်းရပ်စ် ကိုယ့်စက်ထဲကို မ၀င်အောင် တားမယ်
Memory stick တပ်တပ်ချင်း ဘာကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ် က ကိုယ့်ကွန်ပျုတာထဲ ၀င်သွားလဲဆိုရင်
Autorun.inf ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးကြောင့်ပါ
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့စက်တွေမှာ Autorun.inf လေး အလုပ်မလုပ်အောင်
autorun ကို ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်
Window+R ကိုနှိပ်ပြီး run box ခေါ်ပါ
gpedit.msc ရိုက်ထည့်ပြီး group policy editor ခေါ်ပါ
User Configuration> Administrative Template>System ကိုသွားပါ
ညာဘက် အခြမ်းထဲမှာ Turn off autoplay ဆိုတာလေးကို ဖွင့်ပြီး Enable ပေးပါ
ဒါဆို Memory stick တပ်တပ်ချင်း virus တော့ အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး
ဒီလိုလုပ်လို့ စိတ်ချရပြီလားဆုိူရင် တော့ စိတ်မချရသေးလို့ဘူးလို့ပြောရမှာပါ
memory stick ကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်းလေးဖွင့်ပါ
Window+E ကိုနှိပ်လိုက်ရင် My Computer Explorer ပေါ်လာပါပြီ
ပြီးရင် ဘယ်ဘက် Pane မှာ ရှိတဲ့ Memory Stick ပေါ်ကို ကလစ်ပြီး ဖွင့်ပါ
ညာဘက် Pane ထဲက Memory Stick Device ပေါ်ကို Double Click လုပ်ဖွင့်တာ၊ Right click ထောက်ပြီး open ပေးတာ၊ explore ပေးတာကို လုံးဝရှောင်သင့်ပါတယ်
ပြီးရင် Memory Stick ထဲက Folder Name.exe ဖိုင်တွေကိုလုံးဝ မဖွင့်ပါနဲ့
ကိုယ်သံသယရှိတဲ့ ဖိုင်မှန်သမျှကို လက်ရှောင်သင့်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် Memory stick ထဲက ဗိုင်းရပ်စ် မ၀င်နိုင်တော့ဘူးလို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အရင်ကခံရဖူးလို့ ပါအခုတော့ သူများတွေ မခံရအောင်ပြန်လည်ရေးသားလိုက်ရပါတယ်
Microsoft word file ကို password လေးနဲ့သိမ်းမယ်
ကိုယ်ရဲ့ Microsoft word file လေးသူများဖွင့်မှာ စိုးနေရင် ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါ
word file ကိူု save လုပ်တဲ့ box မှာ tool ဆိုတာလေးကိုရှာ
အဲဒီမှာ general option ကိုသွား
အဲဒီမှာ Password လေးကို သူတောင်းသလောက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ
လွယ်ပါတယ်(ကျနော်ပြောတာက word 2007 မှာပါ၊ 2003 မှာလဲ သိပ်မကွာလောက်ပါဘူး ရှာကြည့်လိုက်ပေါ့)
ကဲ မလုံခြုံပေဘူးလား။ တိုတိုတောင်းတောင်း ဖြစ်ပြီးတော့ မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ဆရာလုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်
April 28th, 2012 Computer No Comments »
Explorer Hack ..
Desktop task bar က Start button ရဲ့ Start ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်စာလုံးပြောင်းရအောင် …
ပထမဦးဆုံး Desktop မှာ Temp ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ယာယီ Folder တစ်ခုတည်ဆောက်ပါမယ် .. ။ ပြီးတော့ C:\_WINDOWS ထဲက explorer.exe ကို Temp ထဲကို ကူးယူပါမယ် .. ။ ပြီးရင် .. Resource Hacker Software ကို ဖွင့်ပါ .. ။ File –> Open ကနေ Temp ထဲက explorer.exe ကို ဖွင့်ပါ။ အဲဒီအခါ Resource Hacker ထဲက ဗယ်ဘက် tree view ထဲမှာ .. Bitmap .. Icon .. Menu .. Dialog .. String Table .. Accelerators စသဖြင့် ပေါ်လာတာတွေ့ရပါမယ် .. ။ အဲဒီထဲက String Table ဆိုတဲ့ Folder ကို ဖွင့်ပါ .. ။ String Table ထဲက 37 ဆိုတဲ့ Folder ကို ဖွင့်ပါ .. ။ အဲဒီထဲမှာ .. 1033 ဆိုတဲ့ String Resource တစ်ခုကို တွေ့ရပါမယ် .. ။ အဲဒီ Resource ကို ဖွင့်ပါ .. ။ Offset 578 မှာ “Start” ဆိုတဲ့ စာလုံးကို တွေ့ရပါမယ် .. ။ အဲဒီစာလုံး ကို ဖျက်ပြီး .. စိတ်ကြိုက်စာလုံး အစားထိုးပါ .. ။ အစားထိုးပြီးရင် .. Resource Hacker ရဲ့ ညာဘက်အပေါ်ဘက်မှာ Compile Script ဆိုတဲ့ ခလုပ်ကလေး ကို နှိပ်ပါ .. ။ ပြီးရင် .. File –> Save လုပ်ပါ .. ။ Resource Hacker ကို ပိတ်ပြီး .. Temp Folder ထဲကို ကြည့်ရင် .. explorer.exe_original နဲ့ explorer.exe ဆိုပြီး file နှစ်ခု တွေ့ပါလိမ့်မယ် .. ။ explorer.exe ကို explorer2.exe လို့ နာမည်ပြောင်းလိုက်ပါ .. ။ ပြီးရင် .. C:\_WINDOWS folder ထဲကို ကူးထည့်ပေးလိုက်ပါ .. ။ Run–>regedit ကနေ registry editor ကို ဖွင့်ပါ .. ။
My Computer\_HKEY_LOCAL_MACHINE\_SOFTWARE\_Micorsoft\_Windows NT\_CurrentVersion\_Winlogon အထိ ဖွင့်ပါ .. ။ Winlogon ကိုရောက်ရင် .. ညာဘက် panel ထဲမှာ shell ဆိုတဲ့ String Value တစ်ခုကို ရှာပြီး Right Click နှိပ်ပြီး modify ကိုရွေးပါ .. ။ အဲဒီအခါ Edit String dialog box တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .. ။ Value data ထဲမှာ Explorer.exe နေရာမှာ .. Explorer2.exe လို့ ပြောင်းပေးပြီး OK နှိပ်ပြီး .. registry Editor ကို ပိတ်နိုင်ပါပြီ .. ။ ပြီးရင် .. System ကို Restart ပေးလိုက်ပါ .. ။ Windows ပြန်တက်လာရင် .. Task bar က Start button လေးကို ကြည့်လိုက်ပါ .. ။ စိတ်ကြိုက်စာလုံးလေးဖြစ်နေပါပြီ .. ။ ငှဲငှဲသိလို့မျှလိုက်ပါတယ်
For Mail Reader : http://www.mediafire.com/?58ozmno2rarxngn
Computer ကို အမြန်ပိတ်မယ်(5 စက္ကန့်အတွင်း)
အရေးတကြီး ကွန်ပျုတာပိတ်ဖို့ကြုံလာတဲ့အခါ ကွန်ပျုတာရဲ့ Shutdown time ကြီးကို မစောင့်ချင်ရင်ပေါ့ဗျာ
ctrl+alt+del နှိပ်ပြီး task manager ကိုခေါ်ပါ
အဲဒီမှာ shutdown ဆိုတဲ့ဟာလေးကို ကလစ်လိုက်ပါ
turn off ဆိုတာလေးကို ctrl ကီးလေးနှိပ်ပြီး ကလစ်လိုက်ပါ
ctrl ကီးကို တော့ စက်ပိတ်မသွားမချင်း နှိပ်ထားလိုက်ပါ
ကျနော်ကတော့ ဒီနည်းကို ခနခန သုံးတယ်
စက်ကိုတော့ အခုအချိန်ထိ ဘာမှ effect မဖြစ်ဘူးဗျ
Binary ကိန်းများကို လေ့လာကြည့်ရအောင်
Binary ကိန်းတန်းတစ်ခုမှာ သုညနဲ့ တစ် ဂဏန်းနှစ်မျိုးပဲ ပါပါတယ် .. ။ ကိန်းတန်းတစ်ခုကို ပြည့်စုံအောင်ရေးမယ်ဆိုရင် .. နေရာရှစ်ခုလိုပါတယ် .. ။ Binary ကိန်းတန်း တစ်ခုရဲ့ အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကတော့ 255 ဖြစ်ပါတယ် .. ။ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ဖူး၊ မြင်ဖူးကြတဲ့ တရုတ်ပေသီးခုံလိုပါပဲ .. ။ နေရာရှစ်နေရာရှိတဲ့ ပေသီးခုံတစ်ခုလို သဘောထားကြည့်ပါ .. ။
နောက်ဆုံးနေရာရဲ့ တန်ဖိုးက တစ် ဖြစ်ပါတယ် .. ။ နောက်ကရေရင် ဒုတိယနေရာရဲ့တန်ဖိုးက ၂ ဖြစ်ပြီး နောက်သူ့ရှေ့က ၄၊ ၈၊ ၁၆၊ ၃၂၊ ၆၄၊ ၁၂၈ .. အဲဒီလို ဆပွားတက်သွားပါတယ် .. ။
အဲဒီတော့ .. နောက်ဆုံးနေရာမှာ 1 လို့ ပြနေရင် .. အဲဒါက တန်ဖိုး ၁ ပေါ့ .. ။
2 လို့ မရှိပဲ နှစ်ပြည့်ရှေ့ 1 တစ်နေရာတိုးပြီးဖော်ပြပါတယ် .. ။
00000001 = ၁
00000010 = ၂
00000011 = ၃
00000100 = ၄
00000101 = ၅
00000110 = ၆
00000111 = ၇
00001000 = ၈
00001001 = ၉
00001010 = ၁၀
အဲဒီလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် .. ။
01000101 ဆိုတဲ့ Binary ကိန်းတန်းတစ်ခုရဲ့ တန်ဖိုးကို တွက်ကြည့်ကြရအောင် .. ။
အထက်က ဇယားအတိုင်း ဖတ်ကြည့်ပါ .. ။ တစ်နေရာမှာ 1 ရှိနေတဲ့ အတွက် တန်ဖိုးက ၁ ပါပဲ။
နှစ်နေရာမှာ0ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် တန်ဖိုးက သုညပါ။ လေးနေရာမှာ 1 ရှိနေတဲ့အတွက် တန်ဖိုးက ၄ ဖြစ်ပါမယ်။ ရှစ်နေရာမှာ0ဖြစ်နေတဲ့အတွက် တန်ဖိုး သုညပါ။ တစ်ဆယ့်ခြောက်နေရာမှာ0ဖြစ်နေတဲ့အတွက် တန်ဖိုးက သုညပါ။ သုံးဆယ့်နှစ်နေရာမှာ0ဖြစ်နေတဲ့အတွက် တန်းဖိုးက သုညပါ။ ခြောက်ဆယ့်လေးနေရာမှာ 1 ဖြစ်နေတဲ့အတွက် တန်ဖိုးက ၆၄ ပါ။ တစ်ရာနှစ်ဆယ့်ရှစ်နေရာမှာ0ဖြစ်နေတဲ့အတွက် .. တန်ဖိုးက သုညပါ။
အဲဒီတော့ ဒီကိန်းတန်းရဲ့တန်ဖိုးကို တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် .. ၀ + ၆၄ + ၀ + ၀ + ၀ + ၄ + ၀ + ၁ = ၆၉ ဖြစ်ပါတယ် .. ။ Character ပြောင်းလိုက်ရင် .. အဲဒါဟာ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာစာလုံးကြီး E လို့ ကွန်ပျုတာတွေက သိပါတယ် .. ။ အဲဒီလိုပါပဲ တခြားကိန်းတန်းတွေကို ဒီလို ဖြေရှင်းကြည့်ပါ .. ။ နောက်ပိုင်းမှ Decimal value, Hexa-decimal value, Character တွေ အကြောင်းဆက်ပြောပါ့မယ် .. ။
April 27th, 2012 CMD, Computer No Comments »
Reveal Fake Properties
ကွန်ပျုတာတစ်လုံးဝယ်ယူတဲ့အခါ စက်ဖုံးကို ဖွင့်မကြည့်ပဲနဲ့ CPU Speed၊ Memory Capacity တွေကို သိချင်ရင် .. My Computer ကို right click နှိပ်ပြီး properties ခေါ်ကြည့်ကြပါတယ် .. ။ System Properties မှာ ပေါ်နေတဲ့ CPU Speed၊ Memory Capacity တွေကို တချို့တွေက Registry မှာ ၀င်ပြင်ပြီး ပြောင်းထားတတ်ကြပါတယ် .. ။ ကဲ .. အဲဒါဆိုရင် .. ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဒီ entry အမှန်တွေကို သိရအောင်လုပ်မလဲ .. ?
ပထမဆုံး .. Window Key + R ကို နှိပ်လိုက်ပါ .. ။ Run Dialog box ပေါ်လာတဲ့အခါ .. cmd လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး Enter နှိပ်ပါ .. ။ Command window
ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .. ။ အဲဒီထဲမှာ .. cd desktop လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး Enter နှိပ်ပါ .. ။ နောက်တစ်ခါ .. systeminfo > information.txt လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး
Enter နှိပ်ပါ .. ။ ခဏနေရင် .. Desktop ပေါ်မှာ information ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Text file လေးတစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .. ။ အဲဒီဖိုင်လေးကို ဖွင့်ဖတ်ကြည့်
လိုက်ပါ .. ။ လက်ရှိကွန်ပျုတာရဲ့ CPU Speed၊ Memory Capacity တွေကို တိတိကျကျ သိရပါလိမ့်မယ် .. ။
(မှတ်ချက်။ ။ ဒီ command ဟာ service pack II နဲ့ အရင် Microsoft OS တွေပေါ်မှာ run ပေမယ့် .. Vista နဲ့ Windows7ပေါ်မှာတော့ မစမ်းသပ်ရသေးပါ ..။ )
 Posted in နည်းပညာ	 Tagged computer အတွက်နည်းပညာ	0	Post navigation